ကမ္ဘာကျော် Rapper (၈) ဦးရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ရူးသွပ်စွာ သုံးဖြုန်းခဲ့ပုံများ - Shwe Khit Online TV
HomeEntertainmentကမ္ဘာကျော် Rapper (၈) ဦးရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ရူးသွပ်စွာ သုံးဖြုန်းခဲ့ပုံများ
October 13, 2021 Shwe Khit Online TV Entertainment 0
ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝတဲ့သူတွေ အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ များပြားလှတဲ့ငွေတွေကို ဘယ်လိုတွေသုံးဖြုံးကြသလဲဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ တွေးတောဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ မတွေးတောဖူးရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်။ ဒီစာလေး ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တွေးတော ချင်စိတ်ပေါက်သွားမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော် များများကတော့ မိမိတို့ရဲ့ ငွေကြေးတွေကို အများအကျိုးအတွက် သုံးတဲ့သူတွေရှိတာပရိသတ်ကြီးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခု လူတွေကတော့ စဉ်းစားလို့မရအောင်ကို ငွေကြေးတွေကို မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေအတွက် ရူးသွပ်စွာသုံးစွဲခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ နာမည်ကျော် ရက်ပါတွေလို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူတွေ ဒီစာရင်းမှာ ဘာတွေသုံးခဲ့သလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်… shwekhitonlinetv.com
၈။ လစ်တဲဘေဘီ (Lil Baby)
Lil Baby ဆိုတဲ့ ရက်ပါတစ်ယောက်ကတော့ အတ္တလန်တာမှာရှိတဲ့ Icebox ဆိုတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်မှာ ဒေါ်လာ (၈၀၀၀) တန်တဲ့ Rolex နာရီတစ်လုံးကိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ကျော်ရက်ပါတစ်ယောက်အတွက် ဒေါ်လာ (၈၀၀၀) တန်နာရီဆိုတာ မပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏမို့လို့ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာက သူဝယ်တဲ့နာရီက ကလေးဝတ်နာရီဆိုဒ်ဖြစ်နေလို့ ပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ် … Lil Baby ဟာ သူ့ရဲ့သားမွေးနေ့မှာ Surprise လုပ်ဖို့အတွက် (၇) ကာရက်စိန်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဒီနာရီလေးကို ဝယ်ယူခဲ့တာပါတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ … shwekhitonlinetv.com
၇။ ဆိုဂျာဘွိုင်း (Soulja Boy)
၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်က လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို မှတ်မိကျဦးမလားမသိဘူးရှင့် … Soulja Boy ဆိုတဲ့ဆယ်ကျော်သက် ရက်ပါလေးရဲ့ ခရန့်သက် (Crank That) ဆိုတဲ့သီချင်းလေးလေ … အဲ့ဒီအချိန်က သူ့ရဲ့သီချင်းအယ်ဘမ်ဟာ အတော်လေးကို ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စံချိန်တင်ရောင်းအားကောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ငယ်ရွယ်ပြီး ဝင်ငွေတွေအဆမတန်ရရှိတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးချက်ကလည်း မျက်လုံးပြူးစရာပါပဲ။ လန်ဘော်ဂီနီပြိုင်ကားပုံစံ ဆွဲကြိုးတစ်ခုကိုတောင် ဒေါ်လာ (၂) သိန်းလောက်ပေးပြီး ဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လောက်တောင်ဝင်ငွေတွေရရှိခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစားသာကြည့်ပါတော့ ပရိသတ်ကြီးရေ …… shwekhitonlinetv.com
၆။ လစ်တဲဝိန်း (Lil Wayne)
နောက်ထပ် နာမည်ကျော်ရက်ပါ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lil Wayne ကတော့ သူ့ရဲ့ သွားတွေမှာ ဒေါ်လာ (၁) သိန်းခွဲတန်တဲ့ စိန်တွေကိုတပ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သွားဆရာဝန်နဲ့ သေချာစွာတပ်ဆင်ထားတာမို့လို့ ဒီစိန်တွေကို အလွယ်တကူတော့ ဖြုတ်တပ်လို့မရဘူးလို့သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဝိန်းဟာ ထောင်ဒဏ်ကျတဲ့အချိန်မှာ ဒီစိန်တွေကို ဖြုတ်သိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့နောက်ပိုင်းတော့ ဒီစိန်တွေကို သူ့သွားမှာ ပြန်တပ်တာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ shwekhitonlinetv.com
၅။ ဘာ့ဒ်မန်း (Birdman)
နာမည်ကျော် ဟစ်ဟော့ Family တစ်ခုဖြစ်တဲ့ G-Unit ရဲ့နာမည်မှေးမှိန်ချိန်မှာ ပရိသတ်ရဲ့တွေကိုအလျင်အမြန် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ထပ် Family တစ်ခုကတော့ Young Money ဆိုတဲ့ Family ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနာမည်ကျော်တွေရက်ပါတွေဖြစ်တဲ့ ဒရိတ် (Drake) , (နီကီမင်နာ့) Nikki Minaj တို့ကလည်းသူတို့နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေခဏထားပြီး ဒီအဖွဲ့ရဲ့ အထင်ကရ ရက်ပါတစ်ဦးရဲ့ ရူးကြောင်ကြောင် နိုင်ပုံလေးတစ်ခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ သူက Birdman လို့အမည်ရတဲ့ ရက်ပါတစ်ယောက်ပါ။ ဘာအတွက်ကြောင့်ရယ်တော့ မသိပါဘူး သူက သူ့ရဲ့ဘိုထိုင်အိမ်သာကို ဒေါ်လာ (၁) သန်းအကုန်ခံပြီး ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကော ဘာကြောင့်သူဒီလိုလုပ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ …. စဉ်းစားစရာပဲနော် ….. shwekhitonlinetv.com
၄။ သည်ဂိမ်း (The Game)
သည်ဂိမ်း (The Game) ဆိုတဲ့ ရက်ပါကိုတော့ ပြိုင်ကားခရေဇီ တစ်ဦးလို့ လူသိများကြပါတယ်။ ဒီလိုခေါ်ဝေါ်ရလောက်အောင်လည်း သူ့မှာအလန်းစား ပြိုင်ကားတွေ အများအပြားလည်းရှိပါတယ်။ အပြင်မှာလက်တွေ့မောင်းတဲ့ ကားတွေပိုင်ဆိုင်တာနဲ့ တင်ကြွားလုံးထုတ်လို့ မဝတဲ့ The Game ဟာ သူ့သားအတွက် စိန်တွေစီထားတဲ့ ရီမုကွန်ထရိုး ကားလေးတစ်စီး ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီကားလေးကို ဒေါ်လာ (၁) သိန်းနီးပါး အကုန်အကျခံကာ ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ ဂျေဇီး (Jay-Z)
နောက်ထပ် နာမည်ကြီး ရက်ပါတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဂျေဇီးကလည်း အားကျမခံပါပဲ သူ့ရဲ့ သမီးလေး အိုင်ဗီ (Ivy) အတွက် ဘာဘီရုပ်လေးတစ်ရုပ် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးခဲ့ပါသတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ …… ဘာဘီရုပ်လေးဝယ်ပေးတာ ဘာထူးဆန်းလို့လဲဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ဈေးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒေါ်လာ (၈၀,၀၀၀) တန်ပါသတဲ့ … ဝိုးးးး အံ့သြသွားပြီမဟုတ်လား ပရိသတ်ကြီးရေ ….
ဂျေဇီးက သူ့သမီးအတွက် ဝယ်ပေးတဲ့ ဘာဘီရုပ်ကို တကယ့် စိန်တွေဆင်ထားတာကြောင့် သာမန်ဘာဘီရုပ်တွေထက် တန်ဖိုးမြင့်နေတာလေ …. shwekhitonlinetv.com
၂။ ကန်ညီးဝက်စ် (Kanye West)
ကန်ညီးဝက်စ် (Kanye West) နဲ့ ကင်မ်ကာဒါရှီရန် (Kim Kardashian) တို့စုံတွဲကတော့ Cele လောကမှာအတော်လေးထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သူတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကန်ညီးဝက်စ် ဟာသူ့ရဲ့ ဇနီးချောကို Surprise လုပ်ခဲ့ပုံကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အတော်လေးအားကျဖို့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ဇနီးသည် ကိုယ်ဝန်ရှိတာသိရချိန်မှာ ဒေါ်လာ (၁) သိန်း (၃) သောင်း ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပန်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေရဲ့ ငွေဖြုန်းချက်ကတော့ တကယ့်ကို လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်နော် …. shwekhitonlinetv.com
၁။ ဝစ်ဇ်ခါလီဖာ (Wiz Khalifa)
အဆိုတော် ဝစ်ဇ်ခါလီဖာ (Wiz Khalifa) ကိုတော့ ခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ သူက မယ်ရီဂျိန်း (Mary Jane) ဆေးခြောက် ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ဦးမို့လို့လဲ ပိုပြီး ဟော့ဖြစ်နေတာဆို မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ သူပြောသွားတာကတော့ သူ့အနေနဲ့ လစဉ် Mary Jane အတွက် ဒေါ်လာ (၁၀,၀၀၀) လောက်အကုန်အကျ ခံတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝိုး …. လတိုင်း ဒေါ်လာ (၁၀,၀၀၀) တောင် အဲ့အတွက် အကုန်အကျ ခံတယ်ဆိုတော့ နဲနဲများတာပေါ့နော် ….. shwekhitonlinetv.com
ဟုတ်ကဲ့ အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ နာမည်ကျော် ရက်ပါတစ်ချို့ရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့အရာတွေမှာ ရူးသွပ်စွာ ငွေကြေးတွေကို သုံးစွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အားကျအတုယူစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ ဝေဖန်ပေးသွားကြပါဦးနော် ……
Shwe Khit Online TV မှ ရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။ ကူးယူဖော်ပြခွင့်မပြုပါ။
ဘီလျံနာ သူဌေးကြီး Elon Musk နဲ့ ပတ်သတ်လို့ လူတွေ သိပ်မသိကြသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ချို့